Nepal Dayari | सविता भण्डारीको अमाजुको श्री’मान मिडियामा, ”मैले सा*ई’वर क्रा* ईमको के*श गर्दैछु” पुरा भिडियो हेर्नुहोस (तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?)
सविता भण्डारीको अमाजुको श्री’मान मिडियामा, ”मैले सा*ई’वर क्रा* ईमको के*श गर्दैछु” पुरा भिडियो हेर्नुहोस (तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?)
जेठ २५, २०७८ मंगलबार २२६ पटक हेरिएको
याे समचार पनि पढ्नुहोस् : रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरेपछि विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवनका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी अगाडि बढाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । विमानस्थलका लागि प्रयाप्त बजेट छट्टिएकाले अब छिटै बोलपत्र आह्वान गरिने आयोजना प्रमुख ई. प्रवेश अधिकारीले बताए । अहिलेको टर्मिनल भवनको पश्चिमतर्फ नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण हुनेछ ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार टर्मिनल भवनमा ६ वटा एरोब्रिज रहने गरी डिजाइन भएको छ । भारतीय कन्सल्टेन्सीले तयार गरेका ती डिजाइनबारे अध्ययन भइरहेको र छिट्टै नै स्वीकृत हुने र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए ।
एरोब्रिज भनेको टर्मिनल भवनको प्रस्थान कक्षबाट सिधै जहाज भित्र प्रवेश गर्न मिल्ने गरी बनाइएको एक किसिमको आकाशे पुल जस्तै हो । दोस्रो टर्मिनल भवन बुद्ध कला र संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्ने सोंच सरकारको रहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । एरोब्रिज सुविधा भएको टर्मिनल भवन सम्भवत : नेपालमै पहिलो हुने आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।
विमानस्थल आयोजनाका अनुसार दोस्रो टर्मिनल भवन घाँघरा खोला र हाल रहेको टर्मिनल भवनको बीचमा बन्नेछ । दोस्रो टर्मिनल भवन बनेपछि अहिलेको टर्मिनल भवन आन्तरिक टर्मिनल भवनमा परिणत हुनेछ ।